Shiinaha si kor loogu qaado warshadaha taam & firaaqada - Shiinaha Tianjin Shengxin Sports Badeecadaha
Golaha State ayaa soo saaray qorshe si ay u horumariyaan taam iyo warshadaha firaaqada ah, samaynta goolkii ay u kordhiyaan wax soo saarka ee qaybta in ka badan 3 trillion yuan ($ 442.5 billion) by 2025.
By ka dibna, hannaanka caafimaad la abuuri doono, qaab macquul ah warshadaha, sahayda doonee, alaabta iyo xarumaha taam, baahida sare ee isticmaalka iyo adeegga aqoon sare, sida uu sheegay dukumintiga rasmiga ah lagu sii daayo on Oct 28.
Waxaa loo yaqaan si loo hagaajiyo nidaamka taam iyo wakhtiga firaaqada ah ee adeegga ee dalka by horumarinta hawlaha maalin kasta bodybuilding, isboortiga dibada, iyo isboorti oo leh sifooyin dhaqameed, kor u qaadida dalxiiska ciyaaraha, iyo isdhexgalka Internet Plus horumarinta warshadaha ee.
sports taam Daily, sida kubadda cagta, kubadda kolayga, laliska, ping pong-, tennis iyo orodka, waa in dheeraad ah loogu iyo caan, ayaa sheegay in dokumentiga. Qaar ka mid ah horumarinta isboortiga dibada iyo fashion kale sidoo kale waa in ayaa dedejisay, oo ay ku jiraan xilliga qaboobaha, buuraha, isboortiga biyaha, sports motor, farda iyo golf. ciyaaraha ayaa la sifooyinka dhaqanka, sida fu Kung, doon masduulaagii iyo cayaar libaax, waxaa sidoo kale ka mid ahaa in qorshaha.
Qorshuhu wuxuu sidoo kale ku boorriyay in ay horumariyaan dalxiiska ciyaaraha iyo taageero horumarka warshadaha leh teknoolajiyada, sida internet, Data Big iyo Kombuyuutarada daruurtii.
Ilaa hadda sida beerida ciyaartoyda suuqa warshadaha waa uu ka walaacsan, qorshaha ayaa sheegay in taam ahaanshihiisa iyo wakhtiyada firaaqada ah shirkadaha iyo ururada bulshada lagu dhiiri waa in si loo ballaariyo ganacsiga, iyo qaar ka mid ah noocyada Chinese tayo leh waxaa lagu dhiirigelinayaa inay raadsadaan taageero dheeraad ah oo ka soo suuqa caasimada - sida samaynta IPO iyo soo saarista bonds - si ay u hagaajiyaan tartan caalami ah iyo shirkadaha heer caalami noqdo.
Waxa ay ku baaqeysaa on maamulka deegaanka si ay u qotomiyey dhufto ee hagitaanada si ay u taageeraan GOORMUU diiradda saaray taam iyo wakhtiyada firaaqada ah, gaar ahaan kuwa ay bilowday ciyaartoyda howl gab ah. Intaa waxaa dheer, ururada isboortiga nongovernment ayaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa in ay ballaariso adeegyada iyo bedelo, ilaa xad, adeegyada isboortiga dadwaynaha ee ay bixiso dowladda.
ka taageerida isboortiga hal iyo shirkad laga reebo, dokumentiga ayaa sidoo kale ku baaqay in qaab dhismeedka ah warshadaha filaayo. Saamiga qaybta adeegga ee warshadaha waxaa ku boorriyay in la Koryeelo. Kooxaha taam, hawlaha, saldhigyada warshadaha iyo mashruucyo la dhisay waa in ay dejiyaan tusaale horumarinta warshadaha.
Gobollada leh khayraadka dabiiciga ah gaar ah, oo ay ku jiraan kaynta, biyaha, wetland, buuraha iyo lamadegaan ah, waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay horumariyaan ciyaaraha gaar ah oo ku haboon xaalad hoose, si loo abuuro ay brand u gaar ah.
Qoraalka waxa ku baaqay in dhismaha xarumaha taam iyo wakhtiyada firaaqada ah iyada oo la samaynaayo isticmaalka meelaha magaalooyinka ah oo ay ku jiraan dhulalka baarkiyada, meelaha bannaan, rooftops dhismaha iyo dhulka hoostiisa - abuuraya goobaha taam masaafad 15 daqiiqo '.
Intaa waxaa dheer, waxaa ugu baaqay isticmaalka khayraadka stadium ee hadda jira, dardar-shirkadaha iyo hay'adaha in goobaha ciyaaraha ay u furan yihiin dadweynaha, iyo dhiiri goobaha dugsiyada inuu sii joogo furan ka dib markii fasalka iyo fasaxyada.
Tiro ka mid ah xarumaha taam iyo madadaalada gaar ah sida buurta iyo dibadda xeryaha, xeryaha gaari madadaalo, iyo socodka iyo saldhigyada adeegga saaran waa in sidoo kale la dhisay, ayaa sheegay in dokumentiga.
Si kor loogu qaado cilmi, horumarka iyo awoodda wax soo saarka, waayo, taam ah iyo qalabka madadaalada, dawladda shirkadaha, hay'adaha cilmi-baarista sayniska, iyo ururada bulshada si ay u sameeyaan gaashaanbuur cross-warshadaha, iyo taageero shirkadaha qalabka taam saarka lagu dhiirigelinayaa inay sii dheereysato ganacsiga in qaybaha adeegga, dibada u qabtaan midoobaan, iyo qaniimooyin, mashaariic u wada, iyo hormarineed oo wadajir ah.
Qoraalka waxa loo qorsheeyay si ay u taageeraan shirkadaha horumarinta qalabka loogu talagalay baahida kala duwan ee kooxaha da'da kala duwan, iyo sidoo kale qalabka cilmi leh technology furinta sida qalabka isboortiga wearable iyo dalwaddii qalabka isboortiga xaqiiqada.
Isla mar ahaantaana, siyaasadaha la xiriira la hagaajiyo waa in ay bixiyaan sahlanaato dheeraad ah iyo ilaalinta kooxaha taam kala duwan, dadka la aqoon cilmiyeed ee taam ahaanshihiisa, soo jiitaan lacag bulshada in ay maal-warshadaha ee isboortiga, la xoojiyo tayo maamulka taam, sidoo kale la abuuro shuruudaha adeegga iyo tayada Heerka in taam ahaanshaha iyo madadaalada waaxda marka la eego adeega, tababarada xirfadaha, maaraynta hawlaha, dhismaha kaabayaasha, iyo wax soo saarka qalabka.